Nyika iri kuenda kupi? – Webinar. – JucelinoLuz
Tinovimba uri muchimiro chakanaka uye wakasununguka pakutanga kwechirimo kunyangwe iyi mwedzi mitatu yekutanga yegore ra2022 yanga ichida nyika zvakanyanya. Hondo muUkraine inogumbura uye inokanganisa chikamu chikuru chevagari vePasi vanotya kukwira vakananga kuhondo yenyika yechitatu. Uye zvino kunouya kudonha kwehupfumi uko kwakatanga munaKurume, sekunge kwaziviswa naJucelino. Hakuna kumbobvira kwaita mwero wekufanotaura kwesarudzo dzemutungamiri wenyika wakakwira zvakanyanya muFrance uye kuwedzera mafuta kwasvika pakakwirira zvisati zvamboitika mumatunhu mazhinji epasi. Ruzivo urwu runomonereka nekudzokera kumashure pane izvo zvisirizvo uye runoburitsa mimwe mibvunzo uye kutya kunopinda mudzimba. Asi tiri kuenda kupi? zvinoshamisa nyika.
Iwe unotevera kufanotaura kwaJucelino unoziva kuti nguva ino izere nekuchinja uye zviitiko zvinonetsa, asi kuti hazvina kunyorwa mumatombo, nekuti masimba ari kufamba nekukurumidza zvino. Ndosaka zvaiita sekunge zvakakosha kwatiri kuti tikupe iwe webinar nyowani iyi kuti uve nenhau “itsva” dzaakadzoka kubva kuhusiku hwake paakashanyira ramangwana rePasi.
Kunyange kana akaona uye achiramba achiona zviitiko zvitsva zvinogona kuitika, Jucelino anoziva kuti hapana chinhu chine chokwadi uye tariro nokutenda zvinhu zviviri zvinokosha zvakabatanidzwa zvakamuperekedza kwemakore 52 ekufanotaura.
Iyi webinar haipo kuti iwedzere kutya, asi zvakanyanya kupa ruzivo rwekutarisira zviri nani uye kugadzirira kukwanisa kuita kumusoro uye kuwana mukuchengetedza kwemukati.
Kupfuura nakare kose, mapoka eminamato, kuungana uko rudo runoparadzirwa uye kuungana kwemweya yakanaka inoungana pamwe chete kufungisisa zviri kubatsira kushandura nguva. Kana iwe wakatonyoreswa nharaunda yemunamato yeJDL saka ngativei takabatana mumoyo yedu neChishanu Kubvumbi 1st kuvhenekera runako rwerudo rwatinotakura mukati medu nekuparadzira miranzi yaro pasirese inotyisa. Uye kana iwe usati wanyoreswa uye moyo wako uri kukudaidza, nyoresa kudenderedzwa iri reMinamato yeChiedza.
Rudo runokunda Kutya.